Tag: fitetezana | Martech Zone
Raha vao nanomboka fandaharana tamin'ny roapolo taona lasa izay aho dia nanana mpiara-miasa amiko izay mpandrafitra mpanao mari-pahaizana sy manam-pahaizana. Isaky ny maninjitra amin'ny tanako ankavanana aho dia mampimenomenona zavatra momba ny kilemaina totozy. Tsy dia marina ara-politika ny kinikany ary matetika nofonosina teny vetaveta izay tsy azo antoka ho an'ny asa… fa diso lalana aho. Roapolo taona aty aoriana dia mbola miankina amin'ny totozy ihany aho. Izany dia nilaza fa manana aho